पुरुषसँग मेरो पहिलो रात ! (सत्य घटना)::Leading Nepal News
पुरुषसँग मेरो पहिलो रात ! (सत्य घटना)
तसलिमा नसरिन- मयमनसिंहमा प्राइभेट कोठा नपाइए पनि ढाकामा पाइन्छ भनेर रुद्र भनिरहन्थ्यो　। तर, म कसरी ढाका जान सक्थेँ र ! रेलमा चढेर एक्लै जान त सक्थेँ होला, तर घरबाट अनुमति देलान् र ! अन्त्यमा सान्दाइ मयमनसिंह आएका वेला ढाका जान जिद्दी गरेँ　। ‘पहिलो वर्षको जाँच पास गरेको प्रमाणपत्र लिन ढाका जान्छु,’ भनेँ　। ढाका पुग्नेबित्तिकै ‘एकजना साथीलाई ढाका विश्वविद्यालयको होस्टेलमा भेट्न जान्छु’ भन्दै सान्दाइको कोठाबाट हिँडेँ　। र, सीधै रुद्रको कोठा गएँ। तर, रुद्र खुसी भएन　। खुसीमा उफ्रिनु वा पीडामा आँसु झार्नु रुद्रका लागि असम्भवप्रायः थियो　। शिरदेखि पाउसम्म ऊ रूखको ठुटोजस्तै थियो　। ऊ आफ्ना अनुभूति बाहिर देखाउँदैनथ्यो　। रुद्रले मलाई साडी लगाउन दियो　। सेतो साडीमा स–साना फूलका बुट्टा थिए　। पेटीकोट र ब्लाउज पनि साडीसँग मिल्ने थिए　। रुद्रकी बहिनी विठीले छानेकी थिई यो साडी　। रुद्र आफैँले मलाई साडी छानेर कहिल्यै दिएको थिएन　।
पहिले उसले दिएको हरियो सुती साडी पनि उसकी साथी मुक्तिलाई छान्न लगाएको थियो　। मचाहिँ रुद्रलाई जन्मदिनमा दिने उपहार आफैँ छानेर किन्थेँ　। कुन रङको सर्टसँग कुन रङको पेन्ट मिल्छ, म आफैँ छान्थेँ　। अरूलाई साडी छान्न लगाउँदा रुद्र मेरो रूपरंगबारेमा भन्ने गर्थ्यो, अलि कालीखालको केटीलाई जुन सुहाउँछ, त्यही　।’ रुद्रले मुक्ति र विठी दुवैलाई हाम्रो गुप्त बिहेबारेमा भनेको रहेछ　। त्यो रात उसले मलाई चाइनिज रेस्टुरेन्ट लिएर गयो। खाना खाएर हामी फर्कियौँ। मैले हाम्रो बिहेबारेमा कसैलाई बताएकी थिइनँ　। रुद्रचाहिँ बिस्तारै सबै मान्छेलाई बताउन थालिसकेको थियो　। त्यो रात मैले रुद्रकोमा बस्नुपर्ने भयो　। तर, मैले जानुपर्ने थियो　। सान्दाइलाई एक घन्टामा आउँछु भनेर हिँडेकी थिएँ　। सान्दाइकोमा जान खोज्दा रुद्रले भन्यो, दाइकोमा जाने कुरा नगर　। तिमी मेरी श्रीमती हौ　। यही नै तिम्रो सबभन्दा ठूलो परिचय हो　।’ ‘तर, यो परिचयले म अहिले बाँचेको जिन्दगी बाँच्न सक्दिनँ　।’ ‘तिमी अवश्य सक्छौ　।’ ‘तर, मैले सान्दाइलाई आफू झुनू सानिमाकोमा थिएँ भनेर झुट बोल्नुपर्छ　।’ ‘त्यसो भए पीर नगर　। म झुनू सानिमालाई कुरो मिलाउन आग्रह गर्छु　।’
‘तर, सानिमा माल्लिन् र ?’ ‘किन नमान्नु र मैले सकेको गर्छु　।’ त्यो रात मैले रुद्रसँग बिताउनै पर्ने भयो　। यो रुद्रको माग, आदेश, आग्रह, इच्छा, सबै थियो　। रुद्रले भन्यो, ‘आज तिमी मलाई सम्पूर्ण रूपमा चाहिन्छ　।’ ‘सम्पूर्ण भन्नाले।’ ‘‘सम्पूर्ण भनेको सम्पूर्ण　। पछिका लागि केही बाँकी नराखी ।’ यसको अर्थ बुझेर मेरो मुटु हल्लियो　। मैले गलत गरिरहेको छैन भनेर आफूलाई आश्वस्त पार्न खोजेँ　। वैधानिक रूपमै म आफ्नो लोग्नेसँग रात बिताउन गइरहेकी थिएँ　। मेरै उमेरकी हसिना त त्यसो गर्न सक्छे भने मचाहिँ किन सक्दिनँ त ? मेरै कक्षाकी मन्दिराले पनि सहपाठी सौकतसँग गोप्य बिहे गरेकी थिई　। ऊ पनि सौकतको कोठामा गएर रात बिताउँछे भन्ने हल्ला चलेको थियो　। अन्त्यमा त्यो रात आयो　। रुद्रले मलाई उसको कोठामा लग्यो　। सर्ट, पाइन्ट खोलेर लुंगी मात्रै बेर्‍यो र बत्ती निभायो　। त्यसपछि मलाई बोकेर ओछयानमा लगेर पल्टायो　। म मनमनै भनिरहेकी थिएँ, ‘अब तेरो बिहे भइसक्यो　। बिहेपछि लोग्नेसँग सुत्नुपर्छ　। तैँले सुत्नैपर्छ　। सबै केटीको नियति यही हो　।’ सडक–बत्तीको उज्यालो झयालबाट भित्र पसिरहेको थियो　।
‘ऊ पनि ढाका विश्वविद्यालयमा पढ्छे ?’ ‘अँ, हो　।’ ‘तँ त तेरो सर्टिफिकेट लिन आएकी होइन ?’ ‘अँ लिन्छु　।’ त्यसपछि म सरासर भित्र गएँ र ओछयानमा पल्टिएर रातिको डरलाग्दो त्रासदी सम्भिmएँ　। त्यो रात मैले नाटक गरेको भन्यो रुद्रले　। के त्यो स्वाङ थियो त रु आफ्नो स्वाभिमानमा चोट लागेको महसुस भयो मलाई　। म बिस्तारै रोएँ　। मेरो पूरै जिउ थिलथिल भयो　। मानौंँ म भर्खरै सिंहको ओडारबाट फर्किएकी हुँ　। हिँड्दा पनि कम्मर दुख्न थाल्यो　। पीडाले गर्दा मैले राम्रोसँग पिसाब फेर्न पनि सकिनँ　। आफ्नोे स्तन पनि ढुंगाको थुप्रोजस्तो लाग्यो　। उसको चुम्बनको दाग बिस्तारै हरायो　। मैले बिहेको कागजातमा सही गरेदेखि नै रुद्रले एकरात सँगै बिताउने कुरा गरिरहेको थियो　। तर, बिहेभन्दा अगाडि पनि उसले मलाई कम गिजोलेको थिएन　। प्रत्येकपटक भेट्दाखेरी रुद्र मलाई चुम्बन गर्न र छातीमा हात राख्न झम्टिहाल्थ्यो　। तर, मैले आफूलाई बचाउन सकेकी थिएँ　। मसुदको घरमा हामीलाई बस्न दिइएन　। यही कारणले रुद्र मसँग निकै समय रुष्ट भएको थियो　। मसँग एकरात बिताउनु उसका लागि किन यति अमूल्य ? हो ? मैले कहिल्यै बुझ्न सकेकी थिइनँ　। मैले उसलाई प्रतीक्षा गर्न आग्रह पनि गरेकी थिएँ　। पर्खाइको पीडाको प्रतिफल पनि राम्रै हुन्थ्यो होला　।
सान्दाइले म सानिमासँगै सुतेकी होली भन्ने पत्याउनुभयो होला　। तर, सान्दाइले के सोच्नुभयो होला, कसलाई थाहा ? तर, उहाँ मलाई आफ्नो आँखाबाट ओझेल पार्न चाहनुहुन्नथ्यो　। त्यतिमात्रै होइन, मेरो साथीसँग भेट्न पनि मलाई एक्लै पठाउनुहुन्नथ्यो　। सान्दाइले भोलिपल्ट मलाई आफै रजिष्ट्रारको कार्यालय लगेर सर्टिफिकेट निकालिदिनुभयो　। दुई दिनपछाडि फेरि उहाँले मलाई मयमनसिंह ल्याएर छाडिदिनुभयो　। रुद्रले पछि मलाई भन्यो, ‘‘तिमी मलाई पूरा विश्वास गर्दिनौ　। तिम्रो मनमा अझै शंका छ　।’ उसका कुरा सुनेर मलाई साह्रै दुःख लाग्यो　। मैले म उसलाई माया र विश्वास गर्छु भनेँ　। मायामा सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता विश्वासको हो　। यो विश्वासको डोरी अलिकति कमजोर भयो भने माया गरिँदैन　। मनमात्र पराइन्छ　। रुद्रले एउटा चिट्ठीमा लेखेको थियो, ‘के म त्यस्तो अभागी हो, जसले सबै कुरा बलजफ्ती ठीक पार्नुपर्छ ?’ यस घटनाको वर्ष दिनपछाडि रुद्रले लेख्यो, ‘प्यारी अर्धाङ्गिनी, त्यस रात के भयो थाहा छ तिमीलाई ? पहिलोपटक तिमीलाई साडीमा देख्दा तिमीलाई एकदम भिन्न पाएँ　।